Visa ruzivo - Poltava Medical & Dental Academy
vadzidzi All dzakawanda kuwana chidzidzo vhiza kupinda Ukraine. Mudzidzi anofanira kuzviisa pakutanga Invitation uye kubvuma tsamba Ukraine embasi kana kushandisa kuti vhiza.
Vamhan'ari vanofanira bvunza padyo Ukraine Embassy kana Consulate kana vanoda vhiza kupinda Ukraine. Pepa kana rubvumo tsamba iri rakabudiswa Ukrainian Medical & Dental Academy, International noukama dhipatimendi.
Kuti vagamuchire Kukokwa Kudzidza uye Munopinda Letter, Mudzidzi anofanira kupa zvakanaka unhu Ongororo kopi magwaro anotevera,
International Passport / Kushanya gwaro Data peji vane mufananidzo pamusoro payo. Full Zita mudzidzi uye Serial Nhamba Passport anofanira zvakajeka VISIBLE.The anomutora Passport haidereri pane anotevera 1 gore
Educational Documents O pamwero / SSCE / HSSC,Bachelor kana Tenzi Degree kana achiwanika
zita, Middle zita nokutora
Pasipoti ukoshi musi nyaya & expiry
Temporary kero / Current kero kana zvakasiyana chimiro zvachose kero
Visa achivaratidza Country / nzvimbo
WokuUkraine CHIPATARA STOMATOLOGICAL Academy (MSA) anotanga akadzika chipo tsamba kubva January gore negore uye okukoka kubva mwedzi APRIL.
Student anofanira kunge uchatamisa mhosva FOR pekugara Réservation,vhiza rutsigiro tsamba uye rekutakura .Which achapiwa ataurwa pamusoro kubvuma tsamba 10 kushanda mazuva zvikasadaro tinogona kubvisa admission.After kuwana mhosva University kuchatanga kubudiswa nokuda Kukokwa Letter uye kutora 4 kushanda kwemazuva kupedza muitiro kuti pepa tsamba.
Student taurai Ukraine Embassy yake / nyika yake kuti kushandisa kuti mudzidzi vhiza abuda yepakutanga kukokwa tsamba kubva kwatiri. Mune dzimwe nyika Ukraine embasi rinotanga kushanda pamwe Student VISA nyaya mudzidzi Visa kubudikidza rechi15 July kuti rechi15 November kazhinji naro rakanaka December / March(nokuti mukugadzirira kosi).
Zvichitevera magwaro zvinofanira pasi muUkraine Embassy kuwana mudzidzi Visa.
Documents inodiwa Nokuti kuwana mudzidzi Visa
Visa Application fomu akazadzwa
International Passport Kuenda Document chinoshanda kwete gore asingasviki chete
Original Nemumwe Letter kubva University
chitupa chekuzvarwa, Kushandurirwa mumutauro wokuUkraine uye inonyoreswa kubudikidza gweta Public kana Ukraine Embassy
Original School Zvitupa O pamwero / SSCE / HSSC, Bachelor kana Tenzi Degree kana achiwanika, Kushandurirwa mumutauro wokuUkraine uye inonyoreswa kubudikidza gweta Public kana Ukraine Embassy
Tsamba mvumo kubva Education Ushumiri
General Health- Medical Certificate rakapa mwedzi zviviri risati pamukova muna kuUkraine. Kushandurirwa mumutauro wokuUkraine uye inonyoreswa kubudikidza gweta Public kana Ukraine Embassy Anofanira inonyoreswa ne Health Ministry
HIV- AIDS Negative Certificate wakabudiswa mwedzi zviviri risati pamukova. Akashandurirwa Ukrainian Language uye inonyoreswa kubudikidza gweta Public kana Ukraine Embassy. Inofanira inonyoreswa ne Health Ministry
Sponsorship Tsamba kubva Vabereki / Person ndiani kutakura nemari mudzidzi paaigara / kudzidza muUkraine. Hakusi zvimiso vemarudzi ose
Bank Statement kuratidza zvemari nemano. Hakusi zvimiso vemarudzi ose
12 Pictures 3 * 4 masendimita
Nokoko Air tikiti ndeyegore rimwechete
Mudzidzi anofanira bvunza Ukraine embasi yake / nyika yake zvachose / kwekanguva mutsigiri. Ukraine Embassy hakurevi Russian / wokuUkraine shanduro vamwe vemarudzi.
Please nechokwadi asati asiya nyika yako yose pasi akati magwaro zvinofanira pamwe newe, vari vakuru veimmigration airport kuchaita yokurayira kuti magwaro aya.
20 mifananidzo kuyera 3 × 4 kukura neimwe.
Nemhaka HIV - kuchipatara kunoongororwa chitupa (rinofanira kushandurirwa mumutauro wokuUkraine uye inonyoreswa nokuda gweta pachena kana kuti Ukraine Embassy munyika yenyu).
General zvokurapa chitupa / Physical kugwinya chitupa (rinofanira kushandurirwa mumutauro wokuUkraine uye inonyoreswa neDare Ukraine Embassy munyika yenyu).
Original School certificate (anofanira kushandurirwa mumutauro wokuUkraine uye inonyoreswa neDare Ukraine Embassy munyika yako).
Original Birth Certificate ( rinofanira kushandurirwa mumutauro wokuUkraine uye inonyoreswa pedyo ari Ukraine Embassy munyika yenyu).
Mumwe Photostat kopi pasipoti yako uye Ukrainian vhiza iyo nekanzuru Ukraine Embassy.
Original Invitation tsamba.
The kutiza tikiti inofanira kuva nokoko yako yechizvarwa (i.e., pachena tikiti).